Qalabka caaga ah, caaryada caaga ah, duritaanka caaga - Chapman
Ku soo dhowow shirkadda Chapman Maker, Waxaa la aasaasay 2008. Waxaan haynaa shahaadada SGS iyo nidaamka maaraynta tayada ISO 9001.
5-30 Maalmood Waqtiga hogaaminta
300-500K Bilaha Awood Cirbad
35-50 Noocyo / Bilooyin Awoodda caaryada
Caaryada caaga ah & duritaanka
Xarumaheena wax ku duubaya waxay bixiyaan dabacsanaan socodsiinta dhamaan noocyada qalabka kululeeyaha. Waxaan ku takhasusay wax soo saarka wax soo saarka ee dalabyo kala duwan iyo sidoo kale warshado gaar ah oo ay ku jiraan caafimaadka, qalabka elektarooniga ah, isku xirayaasha, warshadaha, difaaca, gaadiidka, iyo macaamilka.
Iyada oo leh afar dhir iyo 50 + cirbadeyn udhaxeysa 60 ilaa 500 tan, waxaan soosaari karnaa qaybo yar yar sida .75 wiqiyadood illaa xayndaabyada u weyn 80 wiqiyadood (5 lbs). Waxaan kaa caawin karnaa hagaajinta iyo hagaajinta naqshadeynta alaabtaada si loo gaaro natiijooyinka ugu wanaagsan ee suurtogalka ah si loo buuxiyo shuruudahaaga qaybaha.
Soo-saarista Isku-dhafan ee Jirka ah
Wax taaj oo kale Qafiif ah oo Qafiif ah
Qurxinta & Baaritaanka
La kulan dhamaantiin
Hawlaheena sare ee gudaha waxay baabi'inayaan iibiyeyaasha banaanka, iyagoo keydinaya qadar aad u badan oo ah waqtiga hogaaminta iyo kharashyada alaabadaada oo dhan.
Hawlgallada Sare ee Guriga:
Qaybta Ku Biirista: Isku-xidhka Koolojiga, Heat Staking
Daabacaadda iyo Qurxinta
Shirarka Farsamada & Farsamada-Farsamada iyo Imtixaanka